janvier 2021 – Ministère de la Jeunesse et des Sports
CRJS TOAMASINA: FITSIDIHANA KIANJA NATAON’NY MINISITRY NY TANORA SY FANATANJAHANTENA
Tonga nanao fitsidihana ny kianjan’ny Centre Régional de la Jeunesse et des Sports sy ny kianjan’ny lycée technique tao Toamasina ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Andriamatoa TINOKA Roberto niaraka tamin’ireo delegasiona notarihiny ny Zoma 29 Janoary 2021 hariva.
Nentina nanamarihana ny fihaonana sy ho fankaherezana ireo mpilalao ao amin’ny klioba basket ball CRJS sy Kick boxing dia notolorana ranom-boankazo izy ireo.
« TETIKASAN’NY FILOHAM-PIRENENA HO AN’NY FARITRA ATSINANANA : FANANGANANA KIANJA MITAFO OMNISPORT »
Omaly zoma faha 29 janoary 2021 no tonga nidina ifotony sy nitondra fanazavana ara-tekinika amin’ny fananganana Kianja mitafo manarapenitra tamin’ireo tompon’andraikitra isan’ambaratongany amin’ny fitantànana ny tanànan’i Toamasina sy ny fiadidiana ny Faritra ary ny fitantanana ny Lafin-tany ny Minisitry ny Tanora sy Fanatanjahantena, Adriamatoa TINOKA Roberto sy ny ekipany.
ACADÉMIE NATIONALE DES SPORTS : FAMOAHANA MPAMPIANATRA MPANABE ARA-PANATANJAHANTENA
Notanterahina anio ny famoahana ara-pomba ofisialy ireo Mpampianatra- Mpanabe ara-panatanjahantena nandrato fianarana teo anivon’ny Académie Nationale des SPORTS, misalotra ny anarana « ANDIANY MENDRIKA ».
Miisa 156 ireo mpianatra notolorana ny mari-pahaizana maha mpanabe ara-panatanjahantena anio Zoma 29 Janoary 2021 tao amin’ny Kianja mitafo ANS Ampefiloha. Aorian’izao dia hiparitaka manerana ny nosy izy ireo ary hiasa avy hatrany eny anivon’ireo sekoly ambara tonga faharoa.
FARITRA BOENY: FANAMBOARANA KIANJA MITAFO SY KIANJA FILALAOVANA TENNIS MANARAPENITRA ARY DOBO FILOMANOSANA OLYMPIKA
Nitondra vahaolana ho an’ny fanamboarana ny Kianja mitafo manarapenitra ny Minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa TINOKA ROBERTO.Ity farany izay nanatanteraka fidinana teny an-kianja ary namory ireo mpiantsehatra voakasiky ny fanamboarana ny Gymnase izay hahazaka olona 4000 ; fivoriana izay notanterahina tao amin’ny Résidence Mahajanga Be androany. Niatrika izany fivoriana izany Ramatoa VPAN Mahajanga RAHANTANIRINA Lalao sy ny Mpanolotsaina manokan’ny Filohan’ny Repoblika Ravatomanga Mamy ary ny Governoran’ny Faritra Boeny Andriamatoa Mokhtar Salim Andriatomanga.